Imvelo yeDeskithophu ye-Equinox (i-EDE): I-DE encane futhi esheshayo ye-Linux | Kusuka kuLinux
Ukuqhubeka nokubuyekezwa kwethu okujwayelekile kwakho konke Izindawo zedeskithophu (ama-DE) kungenzeka, futhi ngemuva kokuthi sikhulume ngakho ULumina noDraco, namuhla sekuwukujika komunye, okungaziwa kancane kancane, kodwa njengokukhethekile njengakwangaphambili, ogama lakhe lingu Imvelo yeDeskithophu ye-Equinox (EDE).
Imvelo yeDeskithophu ye-Equinox (EDE) njenge-DE, phakathi kwezinto eziningi ezithokozisayo inakho futhi engashiwo ngakho, ukuthi yakhiwe ngayo I-Fast Light Toolkit (FLTK), ithuluzi lokuqhafaza elingaphansi kwe-C ++, ikakhulukazi kwezinye Imitapo yolwazi ye-FLTK modified (ibizwa ngokuthi enwetshiwe I-FLTK noma umane I-eFLTK).
Kodwa-ke, ngaphambi kokungena endabeni ye- Equinox noma umane I-EDE, sikushiya isixhumanisi sencwadi yethu yangaphambilini ehlobene nayo ku- ULumina noDraco, lapho bangahlangana khona nabo, ngaphezu kokuthola izixhumanisi zezinye izincwadi ezihlobene ku: UZiqu-zintathu, i-Moksha, i-Deepin Desktop Environment noma i-DDE, i-Pantheon, i-Budgie Desktop, i-GNOME, i-KDE Plasma, i-XFCE, iCinnamon, i-MATE, i-LXDE ne-LXQT.
1 I-Equinox: Imvelo Encane Nesheshayo Yedeskithophu
1.1 Yini i-Equinox?
1.3 Inguqulo yamanje nokulanda
I-Equinox: Imvelo Encane Nesheshayo Yedeskithophu
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni, ichazwa njenge:
"Imvelo encane yedeskithophu eyakhelwe ukuguquguquka (ukuphendula), ukukhanya ekusetshenzisweni kwezinsizakusebenza nokubukeka okujwayelekile. Okusebenza futhi kwiLinux, * BSD, Solaris, Minix, Zaurus ngisho nakuXBox."
Ngenkathi, esigabeni «Mayelana ...» (Mayelana) kusuka ku-Wiki yayo esemthethweni ichazwa ngendlela eningiliziwe, njengoba kukhonjisiwe ngezansi:
"U-EDE nguwen Imvelo yedeskithophu elula futhi esheshayo yezinhlelo ezifana ne-nix. Okusebenzisa ithuluzi lamathuluzi le-FLTK GUI nokunikeza ukubukeka okujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, yakhelwe ngokuya ngefilosofi ye-UNIX, okusho ukuthi inikezela ngokufeza okuhlukile kwengxenye ngayinye, ukuze "kwenziwe umsebenzi futhi uwenze kahle." Lokhu kwenza i-EDE ihleleke kakhulu futhi futhi kube lula ukuyiguqula ngezidingo ezikhethekile nezidingo zanoma yimuphi umsebenzisi."
Kukhanya futhi kuyashesha.
I-interface enobungani futhi ejwayelekile, ngoba ijwayele ukukhumbuza iningi le-Windows 95 interface.
Isivinini sokuqala nokusebenza kahle noma isivinini sezinhlelo zokusebenza, ngaphezu kwesikhathi esidingekayo ukusihlanganisa.
Ilungele amakhompyutha amadala kanye namadivayisi ashumekiwe, noma kunoma iyiphi i-hardware yamanje yansuku zonke yekhompyutha.
Isebenzisa izici ze-C ++ kancane, ivumela ukuqala okusheshayo, ukusetshenziswa kwememori ephansi, nokuphatheka okuhle.
Inguqulo yamanje nokulanda
Okwamanje I-EDE iya kunguqulo ezinzile engu-2.1, etholakala ukulanda, kokubili kufayela lakho le- isigaba sokulanda sesiza sabo esisemthethweni, lapho ngaphezu kwalokho, ungabona ukuthi kanjani hlanganisa bese ufaka; njengakubo indawo esemthethweni eSourceforge, lapho futhi ungabona okuningi izithombe-skrini isimo sabo sokubukwa samanje noma ukuthuthukiswa kwengcaca. Futhi kweyakhe isigaba sezindaba Ungabona izindaba zakamuva ngakho.
Kubalulekile ukuphawula, lokho kusho I-DE iphelelwe yisikhathi noma ayinazo izinguquko ezisobala njengoba inguqulo yayo yakamuva esivele inokuningi noma okuncane Iminyaka engu-5 selokhu yakhululwa. Kodwa-ke, uma kwenzeka ufuna ukungena esimweni sayo njengamanje kufayela lakho le- Inguqulo ye-2.1, ungafinyelela kufayela lezinguquko elifanayo, ngokuchofoza kokulandelayo isixhumanisi. Futhi noma kunjalo, ayikho ezinqolobaneni zeDebian uma ingafakwa kalula ifakwe ku- Arch, njengoba kushiwo ku Wiki enhle kakhulu.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Equinox Desktop Environment (EDE)», kwaziwa kancane, kuncane futhi kuyashesha Imvelo yedeskithophu (DE), yakhiwe nge I-Fast Light Toolkit (FLTK), i-Graphical Toolkit ngaphansi kwe-C ++; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Equinox Desktop Environment (EDE): I-DE encane futhi esheshayo ye-Linux